musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Denmark Kuputsa Nhau » Tora basa: Denmark inotaurira vanoenda kune dzimwe nyika kuti vashandire rubatsiro rwemagariro
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • mhosva • tsika nemagariro • Denmark Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Hurumende yeDenmark inoti vatanhatu kubva pavakadzi gumi vanobva kuTurkey, North Africa neMiddle East havashandi.
Vatorwa vanozodiwa kuti vawane mabasa kuitira kuti vagamuchire mabhenefiti kuDenmark.
Mitemo mitsva inobatsira vanoenda kunopinda munharaunda yeDanish.
Vatanhatu pagumi 'vasiri vekumadokero' vakadzi vanoenda kuDenmark havashandi.
Vapoteri muDenmark vanofanirwa kushanda anokwana maawa makumi matatu nemanomwe pasvondo kuti vakwanise kuwana rubatsiro kubva kuhurumende.
Mutungamiriri weDanish, Mette Frederiksen
Iyi mitezo mitsva ichaiswa kune avo vanga vachigamuchira rubatsiro kubva kuDenmark hurumende kwemakore matatu kana mana, asi vasina kuwana imwe nhanho yehunyanzvi muDanish.
"Kwemakore mazhinji kwazvo takatadzira vanhu vazhinji nekusakumbira chinhu kwavari," akadaro Prime Minister, uyo akawedzera kuti mitemo iyi yaive yakanangana nevakadzi vanoenda kune dzimwe nyika vachirarama nezvibatsiro, avo vaisashanda uye kubva kune 'asiri ekumadokero' kumashure.
"Iri idambudziko chaizvo kana tiine hupfumi hwakasimba kudaro, apo vezvemabhizimusi vanoda basa, kuti isu tobva tave neboka rakakura, kunyanya vakadzi vane mamiriro asiri ekuMadokero, vasiri chikamu chemusika wevashandi," akadaro Frederiksen.
Dhenimaki ine imwe yeakanyanya kuomesa mamiriro ekupinda munyika mukati me European Union (EU).
Muna Chikumi, yakadzika mutemo nevhoti makumi manomwe nemakumi maviri neshanu, uchiibvumidza kudzinga vanotsvaga hupoteri nekugadzirisa kunyorera ivo vari kunze kwenyika.